Lila, Tita, Hasina ary Mirana Mihomana fatratra ho any Tonizia
Manomana fatratra ny dian’izy ireo ho any Tonizia hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika eo amin’ny taranja tsipy kanetibe olon-telo miaraka i Lila sy Tita ary Hasina sy Mirana mandrafitra ny ekipam-pirenena Malagasy.
Nanomboka tamin'ny alatsinainy 11 martsa teo no nanomboka ny fampivondronana azy ireo etsy amin'ny boulodrôme CBT Mahamasina mandra-piaingan’izy ireo eto an-tanindrazana amin’ny 23 martsa ho avy izao hihazo an’I Tunis. Marihana fa eo ambany fiahian’ny FMP “Federasiona Malagasin’ny Tsipy Kanetibe” tantanan’i Dadah Robison vonjimaika ankehitriny noho ny fanomezam-pahefana azony tamin’ny filoha Beryl Razafiniony noho ny anton’asa mahatazona azy ka efa nampahafantarina an’ireo rafitra rehetra mitantana ny Tsipy Kanetibe eto amintsika hatramin’ny rafitra atsy Afrika sy ny Federasiona Iraisam-pirenen’ity taranja ity. Ny jeneraly Rarivomanana Tahiry kosa no mpanazatra mitantana an’ity ekipam-pirenen’ny Tsipy kanetibe vehivavy Malagasy 2019 ity.Efa nivoaka omaly ihany koa ny anaran’ireo mpilalao lahy sy vavy hanampy an’i Balloteli sy Tsiory hiatrika ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany amin’ny tsipy kanetibe 2019 sokajy « Individuel, Doublette, Mixte » ho tanterahina any Espagne ny 2-5 mey 2019 ho avy izao. Izy ireo kosa dia amin’ny 01 mey 2019 izao no hanainga ho avy Espagne.